အာဏာရှင်ကို ဘယ်လို ဖယ်ရှားမလဲ ဆောင်းပါးရှင် (မောင်မောင်ဝမ်း) ~ ဒီမိုဝေယံ
အာဏာရှင်ကို ဘယ်လို ဖယ်ရှားမလဲ ဆောင်းပါးရှင် (မောင်မောင်ဝမ်း)
အာဏာရှင်ကို ဘယ်လို ဖယ်ရှားမလဲ
(ဖော်ပြပါ ဆောင်းပါးသည် ဗွီအိုအေ အင်္ဂလိပ်ပိုင်းအစီစဉ်မှ March 8,2011 နေ့က ထုတ်လွှင့်သွားခဲ့သော How to RemoveaDictator ကို ဆီလျှော်အောင် ဘာသာပြန်ဆိုခြင်းသာ ဖြစ်သည်)။
အီဂျစ်အာဏာရှင်…. မူဘာရက်ကို လူထုက ဖြုတ်ချနိုင်ခဲ့တဲ့… အကြမ်းမဖက် လူထုဆန္ဒပြပွဲများမှာ လူမှုဆက်သွယ်ရေး ကွန်ယက်မီဒီယာတွေဖြစ်တဲ့… facebookတို့ twitterတို့ဟာ လူကြိုက်အများဆုံး ဖြစ်ယုံမက… အဲဒီ့တိုက်ပွဲတွေရဲ့ လက်နှက်တန်ဆာပလာလည်း ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ အီဂျစ်မှာရှိတဲ့ လူထုတင်မက… ကမ္ဘာ့အခြား အရပ်ဒေသတွေမှာ ရှိကြတဲ့ ပြည်သူလူထုဟာလည်း အာဏာရှင်တွေကို ဖယ်ရှား သုတ်သင်နိုင်ဘို့ အသုံးပြုဆဲပါ။ အဲဒီအထဲမှာ နောက်ထပ် မီဒီယာတခုကို အမေရိကန်နိုင်ငံ ၀ါရှင်တန်အခြေစိုက် ကုမ္ပဏီတခုက ကမ္ဘာအရပ်ရပ်မှာရှိနေတဲ့ အာဏာရှင်များကို ပစ်မှတ်ထားပြီး… အပြောင်းအလည်းကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်မဲ့ အကြမ်းမဖက် နည်းဗျူဟာများကိုအ ခြေခံထားတဲ့….. ဂိမ်းအခွေများကို ထုတ်လုပ်လျှက်ရှိပါတယ်။
၀ါရှင်တန်အခြေစိုက် (The…York.. Zimmerman)ဆိုတဲ့ ရုပ်မြင်သံကြားနဲ့ ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေး ကုမ္ပဏီမှ ဖော်ပြပါ။ ဗွီဒီယိုဂိမ်းခွေများကို ထုတ်လုပ် ပေးလျှက်ရှိပါတယ်။ ထုတ်လုပ်သူဖြစ်တဲ့ Yorkက ပြောတာကတော့… သူတို့ကုမ္ပဏီမှ ဖော်ပြပါ… ဂိမ်းများကို ကမ္ဘာတလွှား ဘာသာစကားပေါင်းများစွာနဲ့ ထုတ်လုပ် ပေးထားပါတယ်တဲ့။ အာရ်ဗစ် ဘာသာနဲ့တောင် ဖန်တီးပေးထားတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အကြမ်းမဖက် လှုပ်ရှားမှုအတွက် နည်းစနစ်များကို လေ့ကျင့်နိုင်တဲ့… အဆိုပါ… ဂိမ်းများကို ကမ္ဘာတလွှား မှာရှိတဲ့ လူများစွာ အသုံးပြုနေပါတယ်။ အဲဒီ နည်းစနစ်များဟာ…. အာဏာရှင် ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဖိနှိပ်သူ အစိုးရပဲဖြစ်ဖြစ် အကြမ်းမဖက်တဲ့ လူထုလှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့ ဖြုတ်ချသွားနိုင်ဘို့… ဗျူဟာများကို မိမိကိုယ်တိုင် ဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။
York….က ပြောတာကတော့… သူတို့ထုတ်လုပ်တဲ့ အထဲမှာ လူကြိုက်အများဆုံး ဂိမ်းခွေကတော့ အာ ဏာရှင်ကို ဆွဲချခြင်း လို့အမည်ရတဲ့ အခွေပါ။ အဲဒီ့ ဂိမ်းခွေဟာ… ယူဂိုဆလပ် နိုင်ငံက အာဏာရှင် သမ္မတ မီလိုဆီဗစ် ကို ဖြုတ်ချတဲ့နေရာမှာ အသုံးပြုခဲ့တဲ့ အကြမ်းမဖက် လူထုတော်လှန်ရေး နည်းစံနစ်တွေကို အခြေခံထားပါတယ်။ မီလိုဆီဗစ်ဟာ ယူဂိုစလပ်နိုင်ငံက… သမ္မတဟောင်းတဦးဖြစ်ပြီး… ၂၀၀၀ခုနှစ် ရွေး ကောက်ပွဲအပြီး… ရွေးကောက်ပွဲရလာဒ် အငြင်းပွားမှုများမှာ ရာထူးမှ နှုတ်ထွက်ပေးရသူပါ။ နောက်တော့ လူတွေကို အစုလိုက်အပြုံလိုက် သတ်ဖြတ်မှုမှာ တာဝန်ရှိသူ တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက် နိုင်ငံတကာ စစ်ရာဇ၀တ်ရုံးမှ ဖမ်းဆီးလိုက်ပြီး… အမှုရင်ဆိုင်နေဆဲမှာပဲ… သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီ့ဗွီဒီယို ဂိမ်းထုတ်လုပ်ရေး ကုမ္ပဏီမှာ လုပ်ကိုင်နေသူ တစ်ဦးကတော့…. ယူဂိုစလပ်ဗီးယားနိုင်ငံက.. အာဏာရှင်.. မီလိုစီဗစ်ကို ဖြုတ်ချဘို့ အကြမ်းမဖက်လှုပ်ရှားမှုမှာ ခေါင်းဆောင်ပါဝင်ခဲ့တဲ့… Ivan Marovic ပဲဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီ့အခါတုန်းက သူကတက္ကသိုလ် ကျောင်းသားတဦးဖြစ်ခဲ့ပြီး ဆန္ဒပြပွဲတွေ ပေါ်ပေါက်ဘို့ စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရသူပါ။ Yorkကုမကုမ္ပဏီ သူ့ကို ဗွီဒီယိုဂိမ်းခွေတွေ ထုတ်လုပ်ဖန်တီးဘို့ ငှားရမ်းခဲ့ပါတယ်။ ဖိနှိပ်တဲ့အစိုးရတွေကို ဖယ်ရှားဘို့အတွက် အကြမ်းမဖက် လူထုလှုပ်ရှားမှု နည်းဗျူဟာတွေ ပါဝင်ပါတယ်။ မကြာသေးခင်ကမှ ထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ ဂိမ်းခွေကတော့ (People power- The Game of civil Resistance) လို့အမည်ရပါတယ်။ အဲဒီထဲမှာတော့… အကြမ်းမဖက် လူထုလှုပ်ရှားမှုမှာ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ရမဲ့ နည်းဗျူဟာတွေ၊ ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရမဲ့ အခက်အခဲတွေကို ကျော်လွှားနိုင်ဘို့ တီထွင်ကြံဆချက်တွေ မိမိအတွေးအခေါ်နဲ့ ဆုံးဖြတ်လုပ်ကိုင်နိုင်တဲ့ အခက်အခဲကို အန်တု ကျော်လွှားခြင်းတွေ ပါဝင်ပါတယ်။ ဒီဂိမ်းခွေကို.. လူငယ်များနဲ့ ပညာတတ် အသိုင်းအ၀ိုင်းက ကြိုက်နှစ်သက်ကြတယ်လို့ ပြောပါတယ်။
Ivan ကပြောတာကတော့…ကမ္ဘာတလွှား အာဏာရှင်များရဲ့ရက်စက်မှုကိုခံနေရတဲ့နိုင်ငံများမှာရှိတဲ့ လူတွေအတွက် အကြမ်းမဖက်လူထု လှုပ်ရှားမှုများကို ဘယ်လို အသုံးပြုရမလည်းဆိုတဲ့ နည်းစံနစ်တွေကို အထောက်အကူ ဖြစ်စေနိုင်မဲ့အရာ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်တဲ့။ (International Center on Non-Violent Conflict in Washington)က အကြီးအကဲတဦးဖြစ်တဲ့ Jack Duvall ပြောတာကတော့ အခု ဗွီဒီယိုဂိမ်းခွေကို တက္ကသိုလ်များမှာတောင်မှ အသုံးပြုနေကြပါတယ်။ ရာပေါင်းများစွာသော နိုင်ငံရေးသိပ္ပံပညာရှင်တွေ၊ လူမှုဗေဒပညာရှင်တွေ၊ ဘွဲ့ကြို၊ ဘွဲ့ရကျောင်းသားတွေ အတွက် သာမာန် စာသင်ချိန်တွေမှာတော့ အခု ဂိမ်းခွေထဲမှာ အာရုံစူးစိုက်နေကြတယ်လို့ သူကပြောပါတယ်။
People….Powerလို့အမည်ရတဲ့ ဂိမ်းခွေကို အင်တာနက်ကနေ ဒေါင်းလုပ်လုပ်ယူလို့ ရပါတယ်။ တန် ဘိုးအားဖြင့်ကတော့. ၁၀ ဒေါ်လာကုန်ကျမှာဖြစ်ပေမယ့် မတတ်နိုင်သူများအတွက် အင်တာနက်ကနေ အခမဲ့ ဒေါင်းလုပ် လုပ်ယူလို့ရပါတယ်။ လက်တင်အမေရိက၊ အရှေ့ဥရောပ၊ အာရှ အစိတ်ပိုင်းတချို့ကနေ ဒေါင်းလုပ် လုပ်ယူလို့ရပါတယ်။ လောလောဆယ်မှာတော့ အင်္ဂလိပ်လိုပဲ ထုတ်လုပ်ထားပြီး… နောင်အခါများမှာတော့ အာရ်ဗီ၊ ရုရှား၊ စပိန် ဘာသာစကားများနဲ့လည်း ထုတ်လုပ်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
- http://api.ning.com/files /rKM7UhhUZBx9ydbKhzPgrjtjOBPWN*hrifsEA3WKiHv*G7SUIyix5z9yr3pERMlrzqEZwD*go7AdaFK4TUyV6riu5mT98LPq/PeoplePowerGameFlyerNov2010.pdf